KALA DUWANAAN TUFAAX AH ASTERISK: SHARAXAADDA IYO ASTAAMAHA, SAWIRRADA IYO SIFOOYINKA KORITAANKA - BEERTA
Noocyada ugu caansan ee geedaha tufaaxa ee caalamiga ah - Asterisk
Ma ogtahay in ay jiraan ilaa toban kun oo noocyo kala duwan oo tufaax ah oo dunida laga diiwaan-geliyey?
Kaliya qayb yar oo iyaga ka mid ah ayaa lagu koray dhaqanka Ruushka iyo baahida beeralayda.
Maanta waxaan jeclaan lahayn inaan kuu sheegno mid ka mid ah noocyada caanka ah ee tufaaxa, kaas oo la yiraahdo Asterisk.
Waxaa lagu qiimeeyaa dhadhanka, kala duwanaanta iyo daryeelka fudud. Cadaynta dhirta dhirta dhirta Asterisk iyo sawir - mar dambe maqaalka.
Astonisk wuxuu tilmaamayaa loogu talagalay noocyada qaboobaha ee tufaaxa.
Noocyada xilliga qaboobaha way ka duwan yihiin waqtiga kaydinta sare.
Waxaa ka mid ah noocyada qaboobaha noocyo noocaas oo kale ah ayaa sidoo kale loo yaqaan iyo caansan: Sinjogska Sinat, Antonovka vulgaris, Aport, Jonagold iyo Lobo.
Xaaladaha keydinta miro ayaa laga yaabaa inay been sheegto ilaa bartamaha jiilaalka, iyo mararka qaarkood illaa bilowga bisha Maarso.
Beergooyinku waa inay noqdaan kuwo aan sugin miro si ay u dhacaan oo ay u baxaan tufaax u kaca 3-4 toddobaad kahor isticmaalka.
Leenahayaga ayaa ururiya horraantii bartamihii sagaalaad, gobollada koonfureed, waxsoosaarka miraha wuxuu noqon karaa mid hore.
Xakameyn, dhejisyo alwaax ah ayaa ugu fiican kaydinta. Sanduuqyada waxaa lagu talinayaa in si fiican loo dhaqo, loo nadiifiyo loona qalajiyo.
Tufaaxu way ka fiican yihiin in la dhigo lakabka keliya. Oo sidaas daraaddeed iyagu sii ballaadhi bay samayn doonaan. Haddii dhinacyada weelka sare ay sareeyaan, waxaad ku dhejin kartaa dusha, laakiin aan ka badneyn 3-4 koob oo korka sare ah.
Qaboojiyaha, waqtiyada dhicitaanka ayaa la dhimayaa. Heerkulka kaydinta waa inuu ahaado 0-2 digrii. Waxaad goyn kartaa goosashada mooska qabow.
Tan iyo cimiladu waxay tahay geed geedka tufaaxa kala duwan ee jiilaalka, Dhirta Apple ee noocyo la mid ah ayaa lagu beeray si u dhow: Antonovka, Ladoga, Belarusian Crimson, Zhigulevskoe, Bogatyr iyo kuwo kale.
Marka la eego, Starter laf ahaanteeda waxaa loo tixgeliyaa dad badan si ay u noqdaan mid ka mid ah pollinators ugu fiican Antonovki.
Sharaxaad kala duwan Zvezdochka
Tixgelin si gaar ah muuqaalka geedka tufaaxa iyo midhaha.
At geed yar krone waa cufan yahay, qaabab isku dhafan. Iyadoo da 'ahaan, waxay noqoneysaa mid ka badan kobcinta iyo wilted.
By 15-20 sano jir tufaax geed waxay gaari kartaa shan iyo hal mitir oo dherer ahoo kor loo qaado ilaa lix mitir dhexdhexaad.
Laamuhu waa dhaadheer, qalfoof, faafin, saqafyo yar yar oo khafiif ah. Caleemaha waa dhuuban, dheer, barafka, midab madow oo leh casaan cas.
Caleemaha waa oval, caleenta cagaaran, dulucda cidhifyada, petioles gaaban.
Tufaax celceliska qiyaasta, miisaankoodu waa 80 ilaa 130 garaam, qaar ka mid ah miraha la gaaro 160-180 garaam.
Foomka wuxuu kuxiran yahay foormo yar oo muuqda. Dusha sare waa siman oo leh dufan yar. Maadada waa dhuuban yahay.
Midabka tufaaxu waa cagaar khafiif ah oo leh ciriirin casri ah oo ku saabsan wareegga oo dhan ee midhaha. Jidhku waa mid casiir leh, cagaar cagaaran, marmarka qaarkoodna maqaarka cas ee ku xiga maqaarka.
Astaanta macnihiisu waxa uu tilmaamayaa noocyada miisaska-macmacaanka. Waxay leedahay dhadhan macaan oo macaan. Midhaha miraha waxay u fiicantahay iibka, si loo soo saaro roodhida guriga, macmacaanka, maadadaha.
Noocyada tufaax ee soo socda ayaa sidoo kale ku faani kara dhadhan weyn: Hore Orlovsky, Orlinka, Aromatic, Dhalinyarada iyo Screen.
Waxyaabaha kala duwan ee tufaaxa Asterisk ayaa la helay sababtoo ah shaqada dheer ee dhirta Ruush Chernenko S.F.
Asterisk wuxuu u suura gashay inuu ka soo gudbo Anise iyadoo leh Pepinkoy Lithuanian.
Shaqada waxaa la sameeyey dhowr sano Machuustka Cilmi-baarista ee cilmi-baarista ee Genetics iyo xulashada Dhirta Miraha.
Chernenko gacanta ayaa sidoo kale iska leh Rennet Chernenko, July Chernenko, Kandil Orlovsky.
Gobollada rasmiga ah ee aagagga la qaaday Gobollada Dhexe ee Ruushka: Qaybta Waqooyi-galbeed, Bartamaha, Volga Dhexe, Volko-Vyatskaya.
Gobollada koonfureed, isugeynta geedaha tufaaxa maaha mid xun. Qaybaha waqooyiga, halkaas oo garoomada ay ka dheer yihiin iyo barafoobay, laguma talinayo in ay koraandarajo ahaan ma kala duwan yahay caabbinta barafka sare.
Noocyada tufaaxa ee soo socda waxay ku haboon yihiin beerashada gobolladan: Baraf Kalvil, Cinnamon New, Uspenskoye, Pepin Saffron iyo Young Naturalist.
Geedka wuxuu bilaabmaa inuu midho dhasho 5-6 sano ka dib marka la furo. Si cajiib leh, geedo koray on rootstocks cuna keen miraha ugu horreeya 1-2 sano hore.
Yields waa kala duwanaan karaan sannad kasta. Celcelis ahaan waxay qaadan karaan 50 ilaa 100 kg oo tufaax ah laga bilaabo hal geed.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan dhimista miro yar iyo hoos u dhigista dhirta oo leh da '. Wuxuu u baahan yahay xayawaan joogto ah.
Haddii aad raadinayso noocyo kala duwan oo si joogto ah u keena, fiiro gaar ah u yeel: Welsey, Sunny, Ural bulk, Lobo iyo Isetsky goor dambe.
Daryeelidda geedka tufaaxa maaha mid adag. Xitaa ninkii beerta hareerihiisa ah wuxuu kori karaa geed. Waxyaabaha ugu muhiimsan - in ay u hoggaansamaan talooyinka aasaasiga ah ee daryeelka saxda ah.
Baahida loo qabo oo aan ka horeynin dhamaadka Abriil ama bilowga Maajomarka barafku dhalaalayo, dhaxan habeenku wuu dhamaan doonaa, iyo heerkulka inta lagu jiro maalinta ayaa diirin doonta dhulka.
Waxaa fiican in aan lagu beerin xiddig dayrta, sida kala duwan ee tufaax Asterisk ma u dulqaadanayo dabayl qabow iyo dhaxan.
Geedku waa inuu xidid ka hor inta uusan bilaabmin cimilada qaboobta.
Apple wuxuu u baahan yahay iftiin wanaagsan, sidaas darteed beeritaanka waa la doorbidi karaa. gudaha qaybta furan ee koonfurta, koonfur-bari ama dhinaca koonfur-galbeed ee goobta.
Hooska, koritaanka geedku wuu hoos u dhacaa, dhalatada hoos u dhacda, miraha way lumiyaan midabkooda buluuga ah iyo dhadhanka.
Goobta beerto waxay u baahan tahay si taxadar leh u qodo oo dhulka hoostiisa dib uga dhigto. Qufac ku beeray qoto dheer godadka ballaaran (qiyaastii 40 ilaa 40 cm).
Bacriminta (peat, ash), ka samee hareeraha dhulka oo ku yaala bartamaha ceelka iyo qoryo qoryo ah, toosan oo xididdadiisa.
Markaa waxaan ku dhufaneynaa dhulka oo waxaannu ku tumanaynaa. Qoorta Root waa inay noqotaa 6-7 cm ka sarreeya heerka dhulka Geedka tufaaxa ayaa aad ugu sahlan in la wada sameeyo.
Beerta qaar ka mid ah ma aha mid muhiim u ah xulashada geedo iyo daryeelka iyaga ka hor beerto.
Waa muhiim in la baaro muuqaalka geedka iyo nidaamka xididka ka hor inta aan wax iibsan.
Maya Ha gaabin xididada geedka tufaaxa, laakiin hayso gooyaa ugu horeysay ee canugga karaa xitaa ka hor inta aadan dhulka ku quusin.
Biyaha geedka tufaaxa waa in la dhexdhexaadiyaa. Waxay uma dulqaadanayo qoyaan xad dhaaf ah. Geedka agteeda waxaa lagu taliyaa samee qulqulka biyaha dushooda. Laakiin, gudaha waraabinta hawada kulul ayaa lagu talinayaa in la kordhiyo.
Baahida dhuleed weed iyo loosen. Xilliga roobka, loosening ciidda muhiim u ah nacaybka nidaamka xididka, iyo cimilada kulul waxay faa'iido u noqon doonaa marinka ugu fiican ee qoyaanka galay ciidda.
Dharka ugu sareeya wuxuu keenaa guga. Marka ugu horeysa samee markaad degto. Waxay noqon kartaa peat leh ash ama bacriminta dabiiciga ah ee qaabka humus, humus faras.
Dharka ugu sareeya waxaa lagu sameeyaa heerka 5-10 kg halkii mitir labajibbaaran. Xilliga dayrta waxaad ku dili kartaa Bacriminta adag iyada oo aan lahayn nitrogen. Aad bay muhiim u tahay in la fiiriyo tayada ciidda.
Haddii ciidda ay tahay mid bacrin ah, geedka tufaaxa ah uma baahna quudin dheeraad ah. Qodobka macquulka ah ee macdanta ayaa sidoo kale yeelan kara saameyn taban, iyo sidoo kale faa'ido daro.
Asterisk hubso inaad gooyso. Tani waa in la sameeyaa si loo kordhiyo dhalidda, ka hortagga cudurrada, iyo sidoo kale ilaalinta sifooyinka qurxinta ee geedka.
Si aad u dhisto taajkii ka fiican, ka dib markii laga beerto taajkii gooyaa 1/3. Gooyo waxaa la sameeyaa sanad walba guga ka hor inta caleemaha ugu horeysay ubaxu.
Si aad u isticmaasho dayrta goor dambe waa wax aan macquul ahayn. Qubabkii hore, laamaha la qalajiyey iyo laamaha ayaa sidoo kale laga saaraa.
Kala sooc ma kala duwan yahay caabbinta barafka wanaagsan. Sidaa darteed, ka hor inta bilawga ah ee cimilada qabow ugu horeysay hubi inaad sameyso cayda dhulka.
Sida mulch fit hay, peat, jilif ama balka. Mulch waa in lagu daboolaa lakab qaro. Si aad u ilaaliso geedo yar yar iyo ka ilaaliso jilif ka soo jiirka, hoyga dheeraad ah ayaa laga sameeyaa kabaha.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan habka si habboon loogu jaro seedling dhalinyaro.
Kala duwan ayaa leh difaac wanaagsan ee cudurrada kala duwanmarar dhif ah ayuu saameeyaa qolof
Haddii tani dhacdo, geedka waxaa lagu daweeyaa daroogada guga. Chorus (1 ampoule 10 litir oo biyo ah) ka hor ubax iyo ka dib.
Marmarka qaarkood miraha way saameysaa. cayayaanka Xaaladdan, waxaad isticmaali kartaa daroogada Fundazole (40 garaam halkii 10 litir oo biyo ah) si loo shaqeeyo.
Haddii ay jiraan calaamado waxyeelo ah ubaxyo, caleemo iyo caleemo xayrta maqaarka, daaweynta ayaa la qaadayaa Topaz (dhalada ku jirta 10 litir oo biyo ah).
Ha ilaawin inaad qaaddo tallaabooyin ka hortag ah oo ka dhan ah cayayaanka caadiga ah ee Beerta tufaaxa, sida aboorka qulqulaya, macdanta barafka, midhaha miraha, lafaha iyo silkworm. Tallaabooyinkee ayaa ah kuwa ugu wax ku oolka leh ee maqaallada kala duwan ee boggayaga.
Astaanta calaamaduhu waa noocyo badan oo tufaax ah oo loo baahan yahay in tufaaxa. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa: dhadhanka fiican, beerashada sahlan iyo daryeelka, dhalidda wanaagsan, difaaca xooggan ee cudurada iyo cayayaanka.
Waxaa ka mid ah cilladaha u qalma in la daciifiyo caabbi baraf ah iyo baahida loo qabo manjooyin joogto ah. Haddii aad doonayso inaad caan u baxdo, hubso inaad u fiirsato talooyinka daryeelka si loo ilaaliyo tayada qurxinta iyo dhalidda sare.